Faaadumoo aad ugu faraxday inanta loo cideeyey dan weyna kaba lahayd baa sidii qof wuxuu rabey si sahlan u helay inta kor u booddey tiri, “haa, waa yahay Xaliimo, aniga naftaydaa mar dhow inaan baxo u baahan.”
Xaliimo irridday ka sii booddey, meeshiina waxaa isugu soo haray Faadumi, maryan iyo inantii kalee adeegeysey.
Faadumo oo sugi la’ayd firaaqaday Maryan u heleyso si ay indhaha uga xanjayso baa waxba ma kaadsane, hadal u soo farumaystay, oo tiri “Haye inanta cusube, Xamar maanta u yahay meel hor leh! bal ii warran Maryan magacaagu sow ma aha?”.
“Flaa eeddo”, Maryan, oo si uba baqayso ayaa tiri.
‘‘Oo waxan ku weydiiyey waligaa maanta ka horow Xamar ma aadan iman miyaa?” Faadumoo belo iska dhigeyso ayaa waydiisay.
“Maya eeddo, weligay maanta ka horow Xamar ma iman, dhegta uun baan ka maqli jirey”, maryan baa ku jawaab celisay.
“Allow ku magan, waxaan ka xumahay in aad fursad aad u weyn dhumisay, waxbase ma lahoo haddaad gadaal ka soo gaartey,” Faadumo markay intaa tiri bay musqusha aaddey, iyadoo hadalkii u furan yahay meeshii inay ka wadana rabto.
Goobta waxaa joogtey inantii kalee Faadumo u adeegeysey Eeddana ay u ahayd. Inantu waxay fahamtay debinka Eeddadeed Faadumo daadinayso iyo dantay ka leedahay dhan kalena waxay ka masayrsanayd tan baase ku soo korodhay meesha. Gabadha Sagal baa la yiraahdaa waana mid fariida; Habartu intay maqnayd bay Maryan hoos warbixin koobanoo digniina ugu dhiibtey. “Naa maqal, waxaan filayaa inaad garan karaysid dulucda sheekada iyo waxa laguu koolkoolinayo. hadalkii oo dhan is ilaali, waxaan kaaga doonayo ma leh oo tani aniga waa eeddadey aabbahay la dhalatay, ha yeeshee waa afmiinshaarad kabihii Nabiga cuntay waxaan ku noollahayna waa dabakhaad iyo been”, Sagal oo si u baqaysaa tiri.
Faadumaa soo gashay Sagaloo Maryan ku haysata, Maryan oo indhihii soo baxeen dhiiloxumina wareentay. waxay ku dhowayd inay cagaha wax ka deydo dan baase celineyse. Awal qof faraxsanoo wixii la weydiiyo u dhug leh bay ahayde, Faadumaa waxay u timi qoftii oo waji kale iyo muuqaal kale leh, sina uba sal ka kacsan.
Faadumo wax bay tuhuntey mase garan in Sagal irbad Maryan ku durtey. Sagal intay hoos Maryan ugu iljabisey bay iska baxday.
Faadumo meeshay awal fadhidey bay soo fariisatay iyadoo hadal maaggan iyo inay Maryan tubta ku soo riddo, waxayna tiri; “Maryan waxaan ku weydiiyey eeddo dhar miyaadan sidan?” “Mayee intaa aan qabo waxaan ahaynoo dhara maba lihi laakiin intaan baan iimaanka ku qabaa”. Maryan, oo indhuhu dibadda yihiin baa ku jawaabtay.
Faadumo intay kacday oo armaajo ku dhaweyd furtay bay guntiimooyin aad khafiif u ahee ka buuxay soo xantoobisey waxayna ku soo sayrtay Maryan dhabteeda, “Waxaad rabtid ka xuloo iska beddel calalada xunee uskagga badan. Naa Sagal! bal dacas la kaalay, ama iskaba daa halkaana kuwa cusbi yaalliine”, iyadoy faan ka tahay Faadumaa tiri.
Meelaan ka dheerayn bay soo jiiddey mise maxaa dacas ah. Maryan cagteedaa la eegay. Kuway u malaynaysey inay le’eg yihiin bay soo dhufatay oo u soo tuurtay.
Maryan awal cago caddaan waxba ma dhaamin dharkii lagu soo tuuraye barafuunku ka soo hadaayaa wax kaleba ahaa wali far uma fidin, inkastoo uu dhabteeda saaraa dacaskii sidoo kale. Harga waraabaa alla u tuuray. Sidii qof maantoo dhan ordayey ama shaqo aad u adag hayey bay neeftuur ka bixi weydey naxdin iyo baqdin dartood.
Maryan iyadaa qof aan waaya arag ah ahayne horay ka fahmi lahayd shaqada gurigaasi u furnaa kaddib markay aragto guntinooyinka iyo dacaska tirada ka bataye haddana aan dadkoodii loo jeedin.
Maryan oo far fidin la waxyaalaha la siinayana inta ka wiswistey taabashadoodaba ka cabsanaysa baa Faadumo aragtay qaadanna weydey xaajadaas. Mudday u sugtey, mise nuuxsiba ha sheegin. Faadumo madaxay inta ruxday oo qamuunyootay tiri, “Allow doqon ha naga dhigin, war waa lax daaqdaan u malaynayaa mise qallal bay qabtaa.?’
Faadumo inta soo kacday Maryanna kor timi bay madaxa ka taabatay. Maryan baa naxday oo in la dilayo u malaysey, sidii bahalku soo socdana isu adkaysay. Aragtay Maryan inaan dad dili jirin, ha yeeshee, jeesjees jiro, waase midaan iyada wax ka dhimayn.
Intiiba waxaa soo galay dhawr gabdhood oo is jajabinaya. Dharka la qabo, sida loo labbisan yahay, boorsooyin siddooyinka dheere aad u yaryare la lalminayo iyo carrabada la lulayaa waaba wax kale.
Waxay dalaq u soo yiraahdeen goobtii maryan iyo Faadumo joogeen. Salaan iyo haahaa been ahee aad u jeedid baa bilowday.
Sagal ayaa hoos ka soo dustey oo inta Maryan meelaan eeddadeed ka arkeyn iska tustay u iljabisey, afmaroojis iyo gacmahana tilmaamo ku siisay.
Maryan way fahamtey waxay tahay walowba ayan weli sii ogaan intay dhan isaga rogtey dharkii dusha ka saarra go’ay huwaneydna isku sii hadoodishey bay Sagal xaggeedii aaddey iyadoo ka baydadsan colka meesha yimid iyo camaaryaleyda sunteeda.
sagal oo awaloo dhanba awaaleysey inay maruun u soo baxdo baa inta garabka qabatey jikadii la gashay. Labo goobood baa loo kala jabay, Maryan iyo Sagal iyo Faadumiyo kooxdii cusbayd.
Sheekaa dhan walba u furuntay. Faadumo iyo kuwii meelaha meehannowga ahaa baa fariistay, “Hayee eeddo, soo lama ladna? Maantase maxaa la hayaa? Ayaamahan inta la busaarsadey
faraha kaa saaraya…